Oxygen macdanta birta carbon dioxide
(lc) (xoog leh) (D) (xoog leh)
4 1 2 4 Haah waa
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 4FeCO3 + O2 → 2Fe2O3 + 4CO2
Waa maxay xaalada falcelinta FeCO3 () ay kaga falceliso O2 (oxygen)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa oo u soo saari kartaa Fe2O3 (iron oxide) iyo CO2 (kaarbon dioxide)?
Fe2CO3 waxaa lagu qafiifiyey oksijiin
Dhacdada ka dib FeCO3 () waxay la falgashaa O2 (oxygen)
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 4FeCO3 + O2 → 2Fe2O3 + 4CO2
O2 + TiCl4 → 2Cl2 + Adeer2
Oxygen tetrachloride titanium koloriin titanium dioxide
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta O2 + TiCl4 → 2Cl2 + Adeer2
Waa maxay xaalada falcelinta ee O2 (oxygen) ay kaga falceliso TiCl4 (titanium tetrachloride)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa Cl2 (chlorine) iyo TiO2 (titanium dioxide)?
Ku gubaya TiCl4 gaaska oksijiinta
Dhacdada O2 ka dib (oxygen) waxay la falgashaa TiCl4 (titanium tetrachloride)
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada O2 + TiCl4 → 2Cl2 + Adeer2
Su'aalaha la xidhiidha falcelinta TiCl4 (titanium tetrachloride)
Waa maxay sifada kiimikada iyo jirka ee TiCl4 (titanium tetrachloride)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh TiCl4 (titanium tetrachloride) falcelin ahaan?
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee Cl2 (titanium tetrachloride)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Cl2 (chlorine) badeecad ahaan?
Su'aalaha la xidhiidha alaabta TiO2 (titanium dioxide)
Waa maxay sifada kiimikada iyo jirka ee TiO2 (titanium tetrachloride)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh TiO2 (titanium dioxide) badeecad ahaan?
nO2 + CNH2n +3N → 0,5H2O + (n+1,5) CO2
n 1 0,5 (n + 1,5) Haah waa
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta NO2 + CNH2n +3N → 0,5H2O + (n+1,5) CO2
Waa maxay xaalada falcelinta ee O2 (oxygen) ay kaga falceliso CnH2n +3N ()?
Amine ku gubaya hawada
Dhacdada ka dib O2 (oxygen) waxay la falgashaa CnH2n +3N ()
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikaad NO2 + CNH2n +3N → 0,5H2O + (n+1,5) CO2
Su'aalaha la xidhiidha falcelinta CnH2n +3N ()
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee CnH2n +3N ()? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh CnH2n +3N () falcelin ahaan?
11 / 2 1 4 4 Haah waa
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 11/2O2 + C4H8O → 4H2O + 4CO2
Waa maxay xaalada falcelinta ee O2 (oxygen) ay kaga falceliso C4H8O ()?
Gubista methyl propionate ee hawada
Dhacdada O2 ka dib (oxygen) waxay la falgashaa C4H8O ()
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 11/2O2 + C4H8O → 4H2O + 4CO2
Su'aalaha la xidhiidha falcelinta C4H8O ()
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee C4H8O ()? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh C4H8O () falcelin ahaan?